New Zealand tour of Zimbabwe 2016 - news, live scores, reports
New Zealand tour Zimbabwe to play two Tests in late July and early August.
A comprehensive bowling display by New Zealand bowled Zimbabwe A out for 173 runs in the second innings after setting a target of 433 runs to secure a massive 259-run win on the third day of the tour match in Harare.
Fifties from Martin Guptill, Henry Nicholls, BJ Watling and Ish Sodhi powered New Zealand to a total of 345 for seven in 90 overs on the first day of the tour match against Zimbabwe A in Harare.
Zimbabwe limited overs captain Graeme Cremer has been picked to lead the 16-man Test squad which will face off against New Zealand in the upcoming two-match series.
New Zealand Cricket is currently monitoring the ongoing social unrest in Zimbabwe ahead of the Black Caps' tour towards the end of this month.